Izindaba - Ungazinciphisa Kanjani Izindleko Zakho Zokukhiqiza ze-PCB?
Kulo nyaka, othintwe wubhubhane lomqhele omusha, ukulethwa kwezinto zokusetshenziswa ze-PCB akwanele, kanti namanani entengo yezinto ezingavuthiwe nawo ayenyuka. Izimboni ezihlobene ne-PCB nazo zithinteke kakhulu. Ngokuthuthuka okujwayelekile kwephrojekthi, onjiniyela kufanele bacabangele ukwenziwa kahle kwemiklamo ukunciphisa izindleko ze-PCB. Bese, yiziphi izici ezizothinta izindleko zokukhiqiza ze-PCB?
Izici eziyinhloko zenza izindleko zakho ze-PCB
1. Usayizi we-PCB nobuningi
Kulula ukuqonda ukuthi ubukhulu nosayizi kuzothinta kanjani izindleko ze-PCB, usayizi nobungako bazo kudla izinto eziningi.
2. Izinhlobo zezinto ezisetshenzisiwe ezisetshenziswayo
Ezinye izinto ezikhethekile ezisetshenziswa endaweni ethile yokusebenza zingabiza kakhulu kunezinto ezijwayelekile.Ukuhlanganisa Amabhodi Esekethe Aphrintiwe kuncike ezintweni eziningana ezenzelwe uhlelo lokusebenza, ezilawulwa kakhulu imvamisa nejubane lokusebenza, kanye nezinga lokushisa eliphakeme kakhulu.
3. Inani lezendlalelo
izendlalelo eziningi zihumushela kuzindleko ezingeziwe ngenxa yezinyathelo eziningi zokukhiqiza, izinto eziningi, nesikhathi esengeziwe sokukhiqiza.
4. PCB yinkimbinkimbi
Ukuxakeka kwe-PCB kuncike kwinani lezendlalelo kanye nenani lama-vias kusendlalelo ngasinye, njengoba lokhu kuchaza ukuhlukahluka kwezendlalelo lapho ama-vias aqala khona futhi ayeke khona, adinga izinyathelo eziningi zokuqhafaza nokumba enqubeni yokukhiqiza ye-PCB. Abenzi bachaza inqubo yokuvikela ngocwazi njengokucindezela izingqimba ezimbili zethusi nama-dielectrikhi phakathi kwezendlalelo zethusi eziseduze besebenzisa ukushisa nokucindezela ukwakha i-PCB laminate enezingqimba eziningi.
Ungawusebenzisa kanjani umklamo wakho?
1. I-track and gap geometry- thinner ibiza kakhulu.
2. Ukulawulwa kwe-impedance- inqubo eyengeziwe yezinyathelo inyusa izindleko.
3. Usayizi nokubala kwezimbobo- izimbobo eziningi namashayeli amancanyana wedrayimitha kubiza phezulu.
4. Ama-vias axhunyiwe noma agcwalisiwe nokuthi ngabe ambozwe ngethusi- inqubo eyengeziwe izinyathelo zandisa izindleko.
5. Ubukhulu bethusi ezingubeni- ubukhulu obukhulu kusho izindleko eziphakeme.
6.Ukuqedela okungaphezulu, ukusetshenziswa kwegolide nobukhulu bayo- Okwengeziwe kwempahla nenqubo yokunyusa inyusa izindleko.
7. Ukubekezelelana- ukubekezelelana okuqinile kuyabiza.
Ezinye izici zenza izindleko zakho.
Lezi zinto ezincane zezindleko ezibandakanya isigaba III zincike kuzo zombili, umenzi wezinto nokusetshenziswa kwe-PCB. Ngokuyinhloko zibandakanya:
1. PCB ukujiya
2. Izinhlobonhlobo zokwelashwa komhlaba
3. Ukufihla iSolder
4. Ukuphrinta kwenganekwane
5.Isigaba sokusebenza se-PCB (IPC Class II / III njll.)
6. Umugqa we-PCB- ikakhulukazi umzila we-z- axis
7. Ukugoqeka eceleni noma emaphethelweni
I-PHILIFAST izokunikeza iziphakamiso ezinhle kakhulu ukukusiza ukwehlisa izindleko zamabhodi e-PCB.